Cristiano Ronaldo oo Codsi Layaab ah u jeediyay Maamulka Kooxda Manchester United | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Cristiano Ronaldo oo Codsi Layaab ah u jeediyay Maamulka Kooxda Manchester United
Cristiano Ronaldo oo Codsi Layaab ah u jeediyay Maamulka Kooxda Manchester United
Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dalbaday Manchester United inay ku ciyaaraan qaab deg deg ah si ay helaan fursado feecan.
Xiddiga reer Portugal ayaa dhaliyey shan gool shan kulan oo uu u saftay kooxda 20-ka jeer hanatay horyaalka Ingiriiska tan iyo markii uu Old Trafford kaga soo laabtay Juventus intii lagu jiray qeybihii dambe ee suuqa
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay ESPN , Ronaldo wuxuu rumeysan yahay inuu xitaa ka sii fiicnaan karo halka uu hada joogo.
halyeeyga weerarka ah ayaa ku boorriyay tababaraha kooxda Ole Gunnar Solskjaer inuu kooxda ka dhigo mid deg deg ah si ay uga faa’ideystaan ​​tayada ugu badan.
Warbixinta ayaa sheegeysa in 36 jirkaan uu doonayo in Red Devils ay si dhaqsi leh kubadda ugu dhaqaajiso aagagga weerarka ‘isla markaana ay u noqoto’ mid af badan oo degdeg ah ‘qeybtii garoonka.
Ronaldo ayaa laba gool dhaliyay kulankiisii ​​ugu horreeyey ee kooxda oo ay la ciyaareen Newcastle United kulan ka tirsan Premier League 11 -kii September ka hor inta uusan is -diiwaangelinin West Ham United toddobaad kaddib.
Xidiga reer Portugal ayaa sidoo kale shabaqa soo taabtay labadii kulan ee Champions League ee uu u saftay kooxda Solskjaer xilli ciyaareedkan, oo uu ku jiro kulankii Villarreal oo ka dhacay Old Trafford.
Previous articlePep Guardiola: ‘Jurgen Klopp ayaa iga caawiyay inaan noqdo tababare fiican’
Next articleHordhaca: Kulamada Serie A Italy, Torino Vs Juventus, iyo Sassuolo Vs Inter Milan
Tababaraha kooxda Thomas Tuchel ayaa qiray in Chelsea ay nasiib u yeelatay inay garaacdo Brentford. Isagoo raacaya wixii indhihiisa uu ku arkay ayuu...